Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay qayb deegaan. Waxaan leeyahay bandow aad u adag. Haddii aan soo daaho waa la i ciqaabayaa. Midaasi sax miyaa? – Tips for refugees
Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay qayb deegaan. Waxaan leeyahay bandow aad u adag. Haddii aan soo daaho waa la i ciqaabayaa. Midaasi sax miyaa?
Qofka adiga ku daryeela ee jooga qaybta deegaanka waxaa khasab ku ah in uu adiga ku ilaaliyo.
Midaasna macnaheedu waxay tahay in aan adigu laguu oggolayn in aad banaanka kusoo daahdid.
Waa sax in aad laguugu dhaho:
Waa in aad guriga joogtid wakhti habboon habbeenkii.
Si kastaba, waxaad xaq u leedahay in aad wakhti fiican la qaadatid saaxiibadaada.
Mararka qaar waxaad is arkaysaa in aad wakhtiga kasoo dib dhacday.
Waxaadna guriga imaanaysaa adiga oo aad uga soo daahay wakhtigii lagu heshiiyay.
Kadibna waa sax in ay kugu adagtahay qaybta aad degantahay.
Si kastaba, mararka qaar ma ahan adiga khaladkaaga in aad soo daahdid.
Sababtoo ah baska ayaa soo daahi kara.
Sababtoo ah ballanta ayaa wakhtigeeda ka dheeraan karta.
Haddii ay sidaas dhacdo xaq ma ahan in lagu ciqaabo.
Dadka adiga ku daryeela waa in ay midaan maskaxda ku hayaan.
In lagu ciqaabo ma ahan mid xaq ah.
Haddii aad u malaysid in laguula dhaqmay si aan cadaalad ahayn waa in aad raadisaa caawimaad.
Tusaale ahaan, waxaad arinta kala hadli kartaa qofka adiga mas’uulka kaa ah.
Previous Previous post: Aniga oo ah (16 sanno jir) waxaan ku noolahay waalidiintayda la’aantooda urur nolol wanaaga dhallinyarada ah. Inta baddan waxaan jeclahay in aan la kulmo saaxiibadayda. Si kastaba, Waxaan leeyahay ballamo aad u baddan. Ma tahay mid ay yihiin dhammaan carruurta oo dhan iyo dhallinyarada ku nool dalka Jarmalka?
Next Next post: Anigu waxaan ahay wiil 15-sanno-jir ah gabadhii saaxiibtayda ahaydna way iga tagtay. Laakiin dhab ahaantii aad ayaan isku jeclayn. Anigu ma aqbali karo kala-tageena. Aad ayay ii dhaawacaysaa. Sidaas darteeda inta baddan waan kadaba galaa iskuulka kadib waxaana isku dayaa in aan dib usoo ceshto. Shalay waxay ii sheegtay in aan la ii oggolayn in aan sidaasi sameeyo. Midaasi sax miyaa?